Inona no atao hoe CDP? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» CDP
CDP no fanafohezana ny Sehatra ho an'ny mpanjifa.
Angon-drakitra mpanjifa afovoany, maharitra, mitambatra izay azo idirana amin'ny rafitra hafa. Ny angon-drakitra dia alaina avy amin'ny loharano maro, diovina ary atambatra mba hamoronana mombamomba ny mpanjifa tokana (fantatra ihany koa amin'ny hoe fomba fijery 360 degre). Ity angona ity dia azo ampiasaina amin'ny tanjona automation marketing na amin'ny serivisy mpanjifa sy matihanina amin'ny varotra mba hahatakarana bebe kokoa sy hamaliana ny filan'ny mpanjifa. Ny angon-drakitra dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra ara-barotra ihany koa ho an'ny fizarana tsara kokoa sy mikendry ny mpanjifa mifototra amin'ny fitondran-tenany.